Site na ịnweta weebụsaịtị na https://pdf.to , ị kwenyere ka usoro a nke ọrụ, iwu na ụkpụrụ niile dabara adaba, ma kweta na ọ bụ ọrụ gị maka ịgbaso iwu obodo ọ bụla. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, a machibidoro gị iji ma ọ bụ ịnweta saịtị a. Ihe ndị dị na weebụsaịtị a na-echebe site na nwebisiinka na iwu ụghalaahia.
E nyere ikikere iji weghaara otu mbipụta nke ihe (ozi ma ọ bụ ngwanrọ) na ntanetị Pdf.to maka nyocha nke onwe onye, na-abụghị nke azụmahịa. Nke a bụ onyinye nke ikikere, ọ bụghị inyefe aha, ma n'okpuru ikikere a, ị gaghị:
gbalịa ịkọ ma ọ bụ megharịa engineer software ọ bụla dị na weebụsaịtị Pdf.to;
wepu ihe ọ bụla nwebisiinka ma ọ bụ ọkwa ndị ọzọ sitere na ihe ndị ahụ; ma ọ bụ
nyefee onye ọzọ ma ọ bụ 'mirror' ihe ndị ahụ na ihe nkesa ọ bụla.
Akwụkwọ ikike a ga-akwụsị kpamkpam ma ọ bụrụ na ị mebie ihe mgbochi ọ bụla ma Pdf.to nwere ike ịkwụsị ya n'oge ọ bụla. Mgbe ị kwụsịchara ịlele ihe ndị a ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị akwụkwọ ikikere a, ị ga-emerụ ihe ọ bụla ebudatara na nke gị ma ọ bụ na kọmputa ma ọ bụ na kọmputa.
A na-enye ihe ndị dị na weebụsaịtị Pdf.to na 'dị ka' ndabere. Pdf.to enweghị akwụkwọ ikike ọ bụla, kwupụtara ma ọ bụ kwenye, ma wepụ ya ma mebie ikike ndị ọzọ niile gụnyere, n'enweghị njedebe, akwụkwọ ikike ma ọ bụ ọnọdụ nke ahịa, ike maka otu nzube, ma ọ bụ enweghị mmebi nke akụ ọgụgụ isi ma ọ bụ mmebi iwu ọzọ.
Ọzọkwa, Pdf.to enweghị ikike ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-egosi banyere nzi ezi, ntụgharị omume, ma ọ bụ ịdabere na iji ihe ndị dị na weebụsaịtị ya ma ọ bụ na-emetụta ihe ndị dị otú ahụ ma ọ bụ na saịtị ọ bụla ejikọtara na saịtị a.
Enweghị ihe ọ bụla, Pdf.to ma ọ bụ ndị na-ebunye ya ga-akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla (tinyere, n'enweghị njedebe, mmebi nke data ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi nkwụsị ahịa) nke sitere na iji ma ọ bụ enweghị ike iji ihe ndị dị na Pdf.to's website, ọbụlagodi na Pdf.to ma ọ bụ Pdf.to onye ọrụ ikike nyere ikikere amara ma ọ bụ ide ederede na ọ ga-eme ka mmebi ahụ dị. N'ihi na ụfọdụ ụlọ ọrụ anaghị ekwe ka ike gwụ gị na njedebe, ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka mmebi ma ọ bụ ọdachi ndị nwere ike ịdaba, njedebe ndị a nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
5. Ezi ihe nke ihe
Ihe ndị na-apụta na weebụsaịtị Pdf.to nwere ike ịgụnye ụzụ, ụkọ akụkọ, ma ọ bụ ihe osise foto. Pdf.to adịghị akwado na ihe ọ bụla nke ihe ndị dị na weebụsaịtị ya bụ eziokwu, zuru ezu maọbụ ugbu a. Pdf.to nwere ike ime mgbanwe na ihe ndị dị na weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Otú ọ dị Pdf.to anaghị eme nkwa ọ bụla iji melite ihe ndị ahụ.
Pdf.to adịghị enyocha niile saịtị ndị jikọtara na ebe nrụọrụ weebụ ya ma ọ bụghị ọrụ maka ọdịnaya nke ọ bụla metụtara njikọ. Ntinye nke njikọ ọ bụla adịghị egosi nkwụnye nkwado site na Pdf.to nke saịtị ahụ. Iji weebụsaịtị ọ bụla dị otú ahụ jikọtara onwe gị n'ihe ize ndụ nke onye ọrụ ahụ.
Pdf.to nwere ike ịmegharị usoro okwu a maka ebe nrụọrụ weebụ ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Site n'iji weebụsaịtị a ị na-ekweta ka agbatị na usoro nke ọrụ a ugbu a.
8. Iwu Ọchịchị
A na-achịkwa usoro na ọnọdụ ndị a ma jiri ya dịka iwu nke Connecticut na ị na-edo onwe gị n'okpuru nanị ikpe nke ụlọikpe dị na State ahụ ma ọ bụ ọnọdụ.
Ndị so na ọrụ PDF.to bulite, tọghata, nweta ma jiri ihe na ọrụ dị n'ihe egwu ha. PDF.to anaghị enyocha ọdịnaya ndị ahịa. PDF.to agaghị aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla azara n'ihi ọrụ PDF.to, ozi, ma ọ bụ ngwaahịa. Onye ọ bụla so na ya bụ naanị maka ihe niile echekwara na PDF.to, maka izi ezi nke ihe gụnyere akwụkwọ ikike, yana iji nweta ikike niile dị mkpa maka njikọ njikọ na ahịa. PDF.to anaghị ekwupụta ma ọ bụ gosipụta akwụkwọ ikike gbasara izi ezi, ogo, ma ọ bụ ọdịdị nke ozi nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị sonyere na ịntanetị nwere ike nweta site na iji ọrụ PDF.to.
Biko rịba ama na-ehichapụ ihe niile ndị ọrụ na-ehichapụ na ọdịnaya n'ime awa ole na-ebugote, ma a na-ehichapụ ihe ntụgharị ha n'ime awa iri abụọ na anọ, n'echiche bụ naanị nchekwa nwa oge
Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe ọ bụla dị na PDF.to mebie ikike nwebisiinka ọ bụla ị nwere ma ọ bụ jikwaa, ị nwere ike izipu ederede ederede nke ebubo ịda iwu ikike ("Nkwupụta") na Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") a họpụtara n'okpuru. . Na ngosi ahụ, ị kwesịrị:
(A) Chọpụta zuru oke nwebisiinka ma ọ bụ ikike ọgụgụ isi nke ị na-ekwu na emebi ya ka anyị wee nwee ike ịchọta ihe a;
(B) Chọpụta URL ma ọ bụ ebe ọzọ akọwapụtara na PDF.to nke nwere ihe ị na-azọrọ na-emebi ikike nwebisiinka gị;
(C) Nye onye nwe nwebiisinka ma ọ bụ onye ikike ime ihe n'ihi onye nwe ya na kọmputa ma ọ bụ nke anụ ahụ.
(D) Gụnye nkwupụta na ị nwere ezigbo okwukwe nkwenye na onye nwebisiinka, onye nnọchi anya ya, ma ọ bụ iwu akwadoghị iji arụrịta ụka;
(E) Gụnye nkwupụta na ozi dị na ọkwa gị ziri ezi ma gbaa akaebe n'okpuru ntaramahụhụ ịgha ụgha na ị bụ onye nwebisiinka nwebisiinka ma ọ bụ ikike ịme ihe n'ihi onye nwe nwebiisinka; na,
(F) Gụnye aha gị, adreesị nzipu ozi, nọmba ekwentị na adreesị ozi-e.
Nwere ike izipu ọkwa gị na onye ọrụ DMCA anyị ahọpụtara site na email, faksị, ma ọ bụ ozi dị ka edepụtara n’okpuru:
Faksị na: 312-803-1667
Mgbe PDF.to na-enweta Ozi Kwesịrị Ekwesị, ọ na-ewepu ma ọ bụ gbanyụọ ngwa ngwa na ihe megidere iwu ahụ wee kwụsị ihe ndekọ metụtara ya (ma ọ bụrụ na ọdabara) dabere na DMCA.
PDF.to nakweere iwu nke ịkwụsị, n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị yana na naanị ezi uche ya, ndị otu elere anya na ha ga-emegharị ndị na-emebi iwu. PDF.to nwekwara ike iji aka ya kpebie ịnweta PDF.to na / ma ọ bụ kwụsị iji ya mee ihe onye ọ bụla na-emebi ikike ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, ma enwere mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ na ọ nweghị.
PDF ka Foto
PDF ka OCR
PDF ka TIFF
PDF ka ZIP
PDF ka WebP
PDF ka GIF
PDF ka PSD
XLS ka PDF
PPTX ka PDF
ICO ka PDF
BMP ka PDF
SVG ka PDF
Image ka PDF
WebP ka PDF
GIF ka PDF
PSD ka PDF
Onye na-agụ PDF
Mbinye aka PDF
253,649 mgbanwe site na 2019!
Kpọtụrụ anyị - Gbasara Anyị - API - amụma nzuzo - Usoro nke Ọrụ - Twitter
Emere ya nadermx - © 2021 PDF.to
Exceed gafere gị akakabarede ịgba nke atọ kwa awa, ị nwere ike tọghata gị faịlụ na 59:00 ma ọ bụ banye na tọghata ọzọ ugbu a.
☝ Mgbanwe enweghị atụ
Nhazi batch dị naanị maka ndị ọrụ Pro. Kwalite ugbu a iji hazie ọtụtụ faịlụ n'otu oge.
Nweta nnweta na-akparaghị ókè ma ọ bụ Gbalịa otu faịlụ